သေတမ်းစာ နဲ့ သေတမ်းကစားး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သေတမ်းစာ နဲ့ သေတမ်းကစားး
သေတမ်းစာ နဲ့ သေတမ်းကစားး
Posted by ဇီဇီ on Sep 16, 2014 in Creative Writing, Cultures, My Dear Diary, Society & Lifestyle, Think Tank | 80 comments
ဟို ကရွဲစည်ပို့(စ) မှာ စရင်းနောက်ရင်း လေးပေါက် စ လိုက်တဲ့ သေတမ်းစာ အကြောင်းကနေ အပြောင်အပျက်ပို့(စ) လေး တင်မှလို့ စဉ်းစားမိတာ။
အဲလို စဉ်းစားမှ အပြောင်အပျက်က ထွက်မလာပဲ ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတာတွေက နည်းနည်း ” လေး ” သွားတယ်။
အာတီဒုံရဲ့ ပို့(စ) လေးကိုလည်းဖတ်ထားမိတာလည်းပါတာပေါ့။
အမှန်က ဟိုပြသနာ ပို့(စ) က အတည်ရေးတာ ဘယ်လိုဖစ်ပြီး ပေါက်ကရဖြစ်သွားမှန်းမသိဝူးးးး
သေတမ်းစာ အကြောင်း စ ပါ့မယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ငါးတန်းလောက်က Will လို Auxiliary verb ကို Noun အနေနဲ့ သေတမ်းစာ လို့ စ သိဖူးခဲ့တာ။
စိတ်ထဲ အမှတ်ထင်ထင်ပဲ။ သေတမ်းစာ ဆိုတာ စိမ်းတော့ စိတ်ဝင်တစား ဘာများတုန်းပေါ့။
နောက်ပိုင်း ဟို ကွယ်လွန် မင်းသားကြီး က သေတမ်းစာထားခဲ့ချင်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပြောင်းတယ် လို့ ကြား မိတော့ လည်း နားမလည်ဘူးး….
အဲဒီတုန်းက နားမလည်တာမှာတင် ရပ်နေတာ။ ဆက်မတွေးကြည့်မိဘူးးး။
နောက်ပိုင်း အသက်ရလာ စာဖတ်တော့မှ တွေးမိတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သေတမ်းစာ မရေးရဘူးလို့ ဘယ်သူကပြောတာတုန်း တို့။
ရေးရင် ဘာသာပျက်သလား တို့ အစုံပါပဲ။
တွေးသာ တွေးမိတာ။ ကိုယ်နဲ့လည်း မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့ အကြာကြီး ခေါင်းခြောက်မခံနိုင်တဲ့ အပြင် ဘယ်သူ့မှ ကို မမေးကြည့်မိဘူးးး
၂၀၁၁ မှာ အဘိုး ဆုံးတော့
မွေးမေလေ့တို့ မောင်နှမ ၅ ယောက် အမွေတွေခွဲတော့ မှ “ဒက်ဒီက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်း ပေးချင်တာကို ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူ့ကို ပြောခဲ့တာကို ဘယ်သူက သိသလိုလို ပဲ” ဆိုတာမျိုးနဲ့ အမွေကိစ္စဖြတ်ရတာ ၂၀၁၄ မှ ပြီးပါတယ်။
ဒါ ကျန်ခဲ့တာ အများကြီး ဆိုတဲ့ထဲ မပါဘူးနော်။
ချစ်ခင်တဲ့ မောင်နှမတွေမို့ ညှိယူကြရတာ။
ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ အရ ဘယ်လို ခွဲတာတို့ ဥပဒေ အရ ခွဲတာ တို့ ပါခွင့်မရလိုက်လို့ ၃ နှစ်လောက် အတွင်း ပြီးတာ။
နို့မို့ ကိုယ်ပါ ဟို စကားပုံ အတိုင်း “မြေးဦး သားထွေး ညီတူပေး” တို့ ဘာတို့နဲ့ တစခန်းထလို့ရသေးတယ်။
အဲဒီကျမှ ဆက်တွေးတာ အမွေ ကိစ္စတွေ ရောက်သွားရော။ အဲဒီ အမွေ ကိစ္စ အတွေးတွေ နောက်မှ တင်ဦးမယ်။
အဲဒါနဲ့ အတွေးကို ရပ်ပြီး သေတမ်းစာ ကိစ္စ ပြန်သွားးးရော။
ကိုယ်သေလွန်ပြီး နောက် ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေကို တရားနည်းကျကျ ရေးထားတဲ့ စာမျိုးကို သေတမ်းစာလို့ ခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ သေတမ်းစာ ကို ဘယ်လို ရေးပြီး ဘယ်လို ရှင်းကြလည်း မသိပေမဲ့
မြန်မာရုပ်ရှင်ထဲမတော့ တစ်ယောက်သေတာနဲ့ တိုက်ပုံလေးဝတ်ထားတဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်က လာပြီး အတက်(ချ) ကေ့(စ) လေးဖွင့်ပြီး စာလေးထုပ်ပြတာမျိုး မြင်ဖူးထားတော့….
သေတမ်းစာ အကြောင်း သိတဲ့ ဥပဒေ ဝန်ထမ်း ဒါမှ မဟုတ် ယုံကြည်ရတဲ့သူများ ရှိသင့်လေသလားးး
ဒီမှာတော့ တို့ သူတို့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ CPF Nomination Form ဆိုတာ ဖြည့်ထားလို့ ရတယ်။
ကိုယ့် အကောင့်ထဲရှိတဲ့ ငွေ, CPF account (အစိုးရ ဆုငွေထဲ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ) တွေ ကိုယ်သေရင် ဘယ်သူ့ကို လွှဲဆိုတာ ဖြည့်ပြီး ပေးထားလို့ရတယ်။
ဖြည့်မထားတဲ့သူ အတွက်က ……
သူသေရင် သူ့ အိမ်ထောင်ဖက်က အရင် ရမယ် (ထင်တယ်)
ပြီးမှ သားသမီး လာတာ (အတိအကျ မသိ)
အဲဒီ ၂ မျိုးမရှိရင်တော့ ..
မိဘမရှိရင် မောင်နှမ အဲလို သွားတယ်။
အသိထဲက ချင်း တိုင်းရင်းသား ကောင်လေး ဆုံးတော့ မြန်မာပြည်က မိဘတွေ သူ့ ငွေတွေ လာထုတ်ရတာ မြင်ဖူးတယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော ပေးချင်တဲ့ သူ ပေးသင့်တဲ့သူကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြောခဲ့ရတာ ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချင် ပြင်လို့ ရတာပေါ့လေ။
ပိုက်ဆံ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေဖြောင့်အောင် လုပ်သင့်တယ် ခေါ်မလားးး
ချစ်ကြွေးမုန်းကြွေးတွေနဲ့ အသေမဖြောင့်တာမျိုး မဖြစ်အောင်တော့ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ရဦးမယ်ထင်တယ်။
ညတိုင်း မအိပ်ခင်လေး တစ်နေ့လုံးရှိတဲ့ အချစ်တွေ အမုန်းတွေ အညှိုးတွေကို ဖြတ်ရတယ်။
ခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်တာလေး ကြိုးစားးပေါ့။
နောက်ပြီး ခုနောက်ပိုင်း ဘယ်သူ့ကို ပဲ ချစ်ချစ် ခွဲခွါဖို့ အရင် စိတ်မှာ အသင့်ပြင်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ရဲ့။
ကျနော့ မွေးမေလေ့ မှာထားတာ တစ်ခုတော့ သတိရ မိ…
မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၂ ကဘာ ပျက်မယ်တို့ဘာတို့ ကြားတုန်းက။ အဟိ။
ဘယ်လို အန်ဒရယ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ရ ရင်ဆိုင်ရ နောက်ဆံတင်းတဲ့စိတ်ကို ဖြတ်ပြီး မှ ရင်ဆိုင်လို့ ပြောတာ။
သူတို့ အန်ဒရယ်တို့ အသက်ဘေးတို့ တွေ့ရမယ် ဆိုလည်း နောက်ဆံလုံးဝ တင်းမှာ မဟုတ်လို့ မှာထားတာ။
“ဘယ်သူ ဘယ်လို ရှိနေပါ့မလဲ၊ ဘယ်သူ က ဖြစ်ပါ့မလား၊ ဘယ်သူနဲ့တော့ဖြင့် မခွဲနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သေခြင်းတရားကို ရင်မဆိုင်ပါနဲ့လို့ ပဲ ပြောတာလို့ နားလည်လိုက်တယ်။
ဒါက ပြင်ဆင်ခွင့်ရမယ် မျှော်လင့်မိလို့ ကြိုတင် မှာကြားထားတာတွေပေါ့။
တရားမှာတော့ သူ့အခေါ်အဝေါ် နဲ့သူရှိမှာပါ။
ကျနော် နားလည်သလောက် ပြောတာ….
သေခြင်းတရားဆိုတာ မမျှော်လင့်တဲ့ အချိန် ရုတ်တရက် လာတာမျိုးကျတော့လည်း ……
ကိုယ့်နောက်ဆုံးထွက်သက် ဘယ်လို ထွက်သွားမှန်းမသိနိုင်တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်တတ်တာကိုးးး……
ဘယ်လို သေရ သေရ ပါ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ မှတ်ချက်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မမဂျီးရဲ့ ပိုစ့်နဲ့ တွဲဖက်လို့လည်း ရတဲ့ . . .စာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။
ဒီမနက်က ရေးတာဆိုတော့. . .
”သေမယ်ဆိုလည်း ဒီလိုသာသေပါရစေ. . .” တဲ့ ။
နက် လိုင်း ကောင်းရင် တင်အုန်းမှ. . .
(တင်အုန်းဆိုတာ လူနာမည်ကို မဆိုလို)
သေတမ်းစာ နဲ့ သေတမ်းကစား ထားတာ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်ကပဲ ရယ်စရာတစ်ခု တွေးမိတယ် … ရှေ့သွား ၂ ချောင်း အသစ်လဲလိုက်ရလို့ .. သွားအတုဖြစ်တဲ့အတူတူ ရယ်လိုက်ရင် လက်နေအောင် စိန်ပွင့်လေး ထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ .. ပြီးတော့ ဆက်တွေးမိတာက သေသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ .. အဖိုးတန်တယ်ဆိုတော့ မီးသဂြိုလ်တဲ့အခါ ဖြုတ်ယူထားလိုက်ကြရင် ခက်မယ်လို့ .. ရှေ့သွားဟောင်းလောင်းနဲ့ သေတာတောင် အရုပ်ဆိုးနေမှာလို့ တွေးမိလို့ ..
ဘူ့ကို အမွေပေး ဆိုတာ ကြိုပြောနိုင်ရင်တော့ မဆိုဘူးးး
စက်တင်ဘာလအတွက် သတ်ရွေးအဖွဲ့ရီးရဲ့ စိတ်ကြိုက် မသာပို့စ်များ ဆိုတာလေး ဂန်နခွဲအဖြစ် ထားပေးဖို့ အဘဖယားသခိုင်ကို တင်ပြားပေးပါ
ငှက်ကထ ဂျီး မိုက် ကို တင်ပြား အဲ အဆိုပြု ပြောလိုက်ပါ့မယ်။
ဘယ်နှစ်ယောက် အဲလေ ဘယ်နှစ်ပို့(စ) သေကြမတုန်းလို့။
ကျုပ်ကတော့ သေမင်းသည် ဘယ်အချိန်တွင် ကျုပ်ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်တွေ့မြင်ကာခေါ်လေမလဲ မသိလေတော့ မနက်နိုးထတဲ့အခါ တစ်နေ့လုံးအတွက် သရဏဂုံတည်ဘုရားရှစ်ခိုး ညအိပ်တဲ့အခါ အိပ်နေစဉ်အတွက် သရဏဂုံတည်ဘုရားရှစ်ခိုး ပြုလုပ်တယ်လေ။ သေပြီးမှသရဏဂုံတည်တာက ကိုယ်မသိနိုင်တော့လို့လေ။
ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းကတော့ ခင်ပွန်းသေသော် ဇနီးပိုင်လေသမို့ အထောက်အထားတင်ပြဖို့ လက်ထပ်စာချုပ်ကိုသာ မိန်းမရေမပျောက်အောင်သိမ်းထားလို့ပြောထားတယ်။
သေမှ အကြွေးတွေကျန်တာ နောက်လူကလိုက်ဆပ်ခြင်းသည် တပါးသူကိုဒုက္ခပေးရာကျလို့ အကြွေးဆို ဘာကြွေးမှမယူဘူး သေခြင်းကဘယ်အချိန်မှန်းမသိသော ပိုင်ဆိုင်ရထားတဲ့ တိုကင်နံပါတ်မို့ပါ။
ကျန်တဲ့ အကြွေးတွေက တော့ နေ့စဉ် စိတ်ခံစားချက် အတိုင်းပဲ။
ကိုခကြီး မိန်းမကို သန်းခေါင်စာရင်းထဲ ထည့်ထားရင် အကြုံးဝင်ပါတယ်..
နှစ်ယောက်ထဲရှိတာ သန်ခေါင်းစာရင်းထဲ ဒီလူတွေဘဲပေါ့ဗျာ ရေမြေသနင်းရေ။
ဒါဆို စာချုပ်မလိုတော့ပါဘူး.. ရမှာပါ…
အော် ကိုခ ကလဲ မြန်မာမှာစာချုပ်မလိုဘူး
သိရင် တရား ၀င်ပြီလေ
ဘောင်းဘီ တန်းတင် စကဒ် တန်းတင်ရင်လဲ
..1) မိဘလုပ်ကျွေးပြီးပလား….( တစ်လတစ်လအိမ်ပို့တာ ….လစာတ၀က်တောင်မရှိ……ကျန်တာကဖွန်ကြောင်တာနဲ့ကုန်တာ အဟိဟိ )
..2)မောင်နှမအငယ်တွေကို ပျိုးထောင်နိုင်ပြီလား …( ကွကိုယ်တောင် လမ်းပြကောင်းဖြစ်ရဲ့လားမသိ )
..3) အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုဘာအကျိုးပြုပြီးပတုန်း. ( နောက်နေတာလား…ကျပ်မပြည့်ပါဘူးဆိုမှ ) …
..တကယ်က လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်နေပြီ…သေသွားရင် ၀မ်းနည်းမျက်ရည်တတွေတွေ …ကျ..ရင်ထုကျန်နေမယ့် ..သန်းပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးထုကြီးကို အားနာ သနားမိသောကြောင့် …အနစ်နာခံအသက်ဆက်ရှင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း….( ကဲ..ယုံကြပလား..ကျပ်မပြည့်တာ..အဟိဟိ )
အာ့တွေ ဘာမှ မစဉ်းစားပေါင်။
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်နဲ့ ရှိ နေတဲ့သူတွေ ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတယ်။
မိဘရော မောင်နှမတွေရော သူငယ်ချင်းတွေရော
ရှိနေတဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတိုင်း ကိုယ့်ကြောင့် ဘယ်သူမှ နစ်နာမှု မရှိအောင် အရင် ကြိုးစား နေနေတုန်းး
မသိလိုက်ပဲ ကွကို နစ်နာနေကြတာမိုးတော့ သမီး မသိဘူးပေါ့နော်။
ဒီကချင်တော့ သေတမ်းစာရေးဖို့ တောင် စာရွက်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး…
.ဘယ်အကလောင်လည်းကွ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကို နာမည်ဖျက်တာ..ဟေ
.ကျုပ်တော့ အိမ်ကိုမှာထားတယ်…ကျုပ်သေရင် မီးမရှို့ဖို့ …ကျုပ်အဲ့အပူဒဏ်ခံနိုင်မယ်မထင်လို့
မတော်လို့ အသက်ထွက်ခါနီးမှ “ဟယ် နာ့ ဘာမလုပ်ခိုင်းခဲ့ရဘု ” တွေ ဘာတွေ တွေးမိရင်
အနော်တို့က သေတမ်းစာရေးလို့ ရလားဟင်?
အချိန်သာရရင် သေသေချာချာဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးပဲ…
သေတယ်ဆိုတာ နှုတ်ထွက်တာ တစ်မျိုးပါပဲ..
ဒီလောက ထဲက အလုပ်ထွက်တယ်… နှုတ်ထွက်တယ် … ပေါ့
ဦး ပါ ပြောတတ်လိုက်တာ။
အာ့ဆိုလည်း ကျမရဲ့ ကျန်ရှိ ကြွေးများကို ဘယ်သူ့ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်တယ် ဘာညာ သရကာပေါ့။
တောက်ညစ်ကပ်တဲ့ တူဒွေ တေဘီသာမှတ်
ဇီ နဲ့ ဝါးနဲ့ က ချစ်ကြတယ်နော်။
တူညားလဲ သေ တပို့စ် ရေးမလားလို့…
ရေးချင်ရင် ရေးလေ မွအိ။
ဒီ တစ်လလုံး မှီသေးတယ်။
ကျုပ်တို့ ဗမာတွေ ကတော့ ယောက်ျားသေရင် သူယူ တရားဝင်ယူထားတဲ့မိန်းမတွေခွဲယူဘဲ
အဲ မိန်းမသေရင်တော့ သူယူထားတဲ့ယောကျာ်း တစ်ယောက်ထဲ ရ မှာသေချာတယ်
ဘာမှ ပေးစရာ အမွေချန်မထားနိုင်သူကတော့ ကျန်သူတွေကို အမွှေဇယားတွေမထားခဲ့ဘူးပေါ့
သေသွားတဲ့လူ က ထားခဲ့တဲ့သေတမ်းစာဆိုပြီး
လက်ကိုင်ပုံးအမဲ ထဲက စာရွက်ကြီးထုတ်ဖတ်ပြတာမြင်တော့
အဲဒီ ပြကွက်တွေကတော့ ထပ်နေပါပြီ။
ကျနော်တို့ အမွေဆက်ခံခွင့် ဥပဒေမှာ ရှိပြီးသား နော့။
မိန်းမတွေလဲညီညီမျှမျှ တစ်ယောက်မက ခွဲပေးချင်ရင်ခွဲပေးလို့ရအောင် တရားဝင်ယောကျာ်း တစ်ယောက်ထက်ပိုယူခွင့်ရရေး ဥပဒေလေးထည့်ပါလို့ မေစုတက်လာတဲ့အခါ လက်တို့လိုက်ရင်ကောင်းဘူးလား။
အဟေးဟေး (သံခမောက်လေး ဆောင်းထားအုံးမှ)
နံပတ် ၁ –
နံပတ် ၂ –
ခုကတော့ မြန်မာပြည် ခေတ်မှီနေပါပြိ… တခုပဲ တကယ်လုပ်မလုပ်ပါ… ရုံးမှာ လူမှုဖူလုံရေးတွေ လာတယ်.. ကဒ်တွေ လုပ်ရတယ်.. ၁ အချက် သေရင် ၁၀ သိန်းရပြိ… နောက်လူ စိတ်မညစ်ရဘူး… ၂ အချက် အဲမှာ လာပါပြီ ကိုယ်သေသွားရင် အာမခံကြေး ဘူ့ ပေးမလဲဆိုတာပဲ… ဟဲ .. တချို့က အမေတွေ မိဘတွေကို ပေးတယ်ဗျ.. အဲဒါ လူမှုဖူလုံရေးက ဆရာမတွေက အပျိုကြီးတွေဆိုတော့ ဘာပြောတယ် မှတ်လဲ.. ဟဲ့.. နင်တို့မိန်းမ ကိုပေးလေတဲ့… Form ဖြည့်တုန်းက Martial Status ထည့်ရတာကိုး… ဒါလေးကတော့ ရီစရာ အမှတ်တရလေးပါ…
ဪ။ အာ့ ဆို မဆိုးဘူးပဲ။
ကျနော် သေရင် ကွန်ပြူတာတွေ ဖုန်းတွေကို factory reset လုပ်ပစ်ကြပါ လို့ မှာထားခဲ့ရမယ်။
ကျန်တာတွေကတော့ စိတ်ပြတ်ပါတယ် မောင်နှမ မရှိ အိမ်ထောင်မရှိ(သေး) ဆိုတော့ကာ…
ရှိတဲ့ အကြွေးတွေလဲ မြန်မြန်ဖြတ်ပစ်မှပါ….း)
အလုပ်မပြီးရင်ကို ညဘက် စိတ်မဖြောင့်လို့အိပ်မပျော်နိုင်တာမို့
ညနေစောင်းရင် အွန်လိုင်းမှာ က အစ အလုပ် အဆုံး အကြွေးမထားပဲ ရှင်းတတ်တာကြာပါပြီ။
ချက်ဟစ် က အစပေါ့။
ဆရာ မိုးဟိန်းလို သတ္တိရှိနိုင်ပါ့မလား…
မိုးဟိန်း (သားဂျာနယ်ကျော်) ရဲ့
(26.07.2010) ၁၃၇၂ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့မှာ
(26.07.2010) ၁၃၇၂ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့မှာ နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ
သေရမှာထက် ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ခွဲခွါရမှာကို ပိုကြောက်တယ်။
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ လုပ်ပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်အဖို့ သေခါနီးနောက်ဆံငင်စရာ ကြောက်စရာမရှိလို့ မြင်ပါ၏
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ မဟုတ်လေတော့
တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးခဲ့ချင်ရဲ့ လို့သာ….
ဘူ့ အတွက်မှ လုပ်မပေးချင်ဘူးး
ကွကိုယ် ဘွကူးကောင်းအောင် အရင် လုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်.။။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် ကောင်းအောင်နေထိုင်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ကောင်းတာ လုပ်ပေးသွားဖို့ပဲ စဉ်းစားတယ်။
ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ သူတွေကိုပဲ ထိုင်ပြောနေတဲ့ ဘေးထိုင်ဘုပြောသမား မဖြစ်အောင် နေရင်ကို အနည်းဆုံး တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးရှိ။
မကောင်းအောင် လုပ်တဲ့သူတွေကို ထိုင်ဆဲပေးနေရင်ကို နိုင်ငံ အတွက် အကျိုးရှိ။
ကိုယ့်အတွက် ကို ထိပ်မှာတင်ထားတာ
မြန်မာတွေမှာ.. .လက်ထပ်စာချုပ်မရှိ..။ သေတမ်းစာမရှိ..။
ဖြစ်လာမှ.. အမွေလု.. ။ အတုလုပ်နဲ့.. မဖြစ်စကောင်းလေ..။
ဥပဒေနားလည်သူတွေ.. သေသေချာချာ လုပ်ထုံးတွေကြေငြာပေး.. ပညာပေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်..။
သေတမ်းစာနဲ့ ဘာသာ တရားနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး မို့လားဟမ်??
သေတမ်းစာမရေးသွားတာဟာ.. ကျန်ရစ်သူတွေကို ဒုက္ခပေးသွားတာတခုလို့.. မြင်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ရင်.. Will ရေးခွင့်ရှိပြီလို့ဆိုတာပဲ..
ဂေါတမဗုဒ္ဓလည်း.. ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနည်း.. သူ့ရဲ့ Will ကိုပြောတာပဲ..
ဘယ်လိုနေရစ်ကျလို့… မှာတာဟာ.. Will ပေါ့..။
တချီု့ရဟန္တာတွေကတော့… ကျွင်းရုပ်ခန္ဓာကို.. ဘယ်သူလာမှ..ဘာညာ.. အဓိဌာန်ထားတာ.. သူ့သေတမ်းစာပါပဲ..။
လူသားအတွက်.. . အရေးကြီးတဲ့.. အမှန်သေနည်း(ကြီး) တခုဖြစ်ကြောင်း..။
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် သေတမ်းစာရေးထားခဲ့လဲ ဥပဒေကြောင်းအရ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦးသေရင် အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ…
ကဲ… ဘီလိုလုပ်မလဲ သူကြီး
ဆောရီးဇီဇီရေ..။ ဟုတ်ပါ့.. ဖက်ဖက်ကက်ရေ..။
.. သေတမ်းစာဆိုတာ.. မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် တရားမ၀င်ပါတဲ့..။
ကျန်ရစ်သူတွေ..အမွေကိစ္စတွေနဲ့.. နောင်ဂျိန်ချအောင်.. ချွန်တွန်းလုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေပါပဲ..။
မေး။ ။ မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်မြန်မာကပြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သေတမ်းစာရေးခွင့်ရှိသလား။
ဖြေ။ ။တရုတ်မြန်မာကပြား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသေတမ်းစာရေးခွင့်ရှိ မရှိဟူသည့် ပြဿနာ ကို”စီရောင်အလင်းနှင့်ဒေါ်သိုက်(၁၉၄၉ မတစ လွှတ်တော် ၁၆၈)” ၌ဝေဖန်ဆွေးနွေးပြီးနောက် တရုတ်မြန်မာကပြား ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများနည်းတူသေတမ်းစာရေးခွင့်မရှိဟု ဆုံးဖြတ်သည်။ထိုစီရင်ထုံးကို နိုင်ငံတော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အတည်ပြုသည်။”ဒေါ်သိုက်နှင်စီရောင်အလင်း(၁၉၅၁ မတစ လွှတ်တော်ချုပ် ၁၃၃)
မေး။ ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် သေတမ်းစာရေး၍အမွေခွဲဝေခွင့် ရှိ မရှိ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် သေတမ်းစာဖြင့်အမွေခွဲဝေခွင့်မရှိပေ။ အမွေဆက်ခံခြင်းအက်ဥပဒေအရ ‘Will’သေတမ်းစာဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းရှင်သည် မိမိသေဆုံးသောအခါ ၄င်း၏ပစ္စည်းများကို မည်သို့မည်ပုံစီမံခန့်ခွဲစေလိုကြောင်း ၄င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ထားသည့်တရားဝင်ကြေညာချက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုမှာပစ္စည်းရှင်ကွယ်လွန်ပြီးမှသာအကျိုးသက်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ထိူ့ကြောင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသေတမ်းစာရေးခွင့်မရှိဟု ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်
ဟုတ်ပါ့ မြေလုပ်တုန်းက အမည်ပေါက် ဘိုးတော် လျှောတော့ သူ့မိန်းမ နာမည်နဲ့ ကျမ်းကျိန် အင်ထုရသေးတယ်… သေစာရင်းပါ ရှာလုပ်ရတာ… အမှန်တော့ သူတို့ မလုပ်ပေးထားလို့လေ… ပြီးတော့ ရှာရအောင်လဲ ပွဲစားအဆင့်ဆင့်ဆိုတော့ လိုက်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးလေ… အဲတော့ အာဘင်ထုရတာပေါ့…
အကျီအဖြူရောင်.. ညက်မှန်. ဦးထုပ်အဖြူရောင်..
အိုင်းလိုင်နာ…. ဖိနပ်ဖြူလေး… ဂါဝန်ပန်းရောင်….
အမွေးစုတ်ဖွားဖိနပ်လေး…. အိုင်ဖုန်း… ဟန်းချိန်း…
ဒီလောက် တော်တဲ့ တူမလေးကို ရလို့ တေပျော်ပါဘီ။
အ၀တ်အစားတွေပေးလဲ ယူ ညည်း ၀တ် မယ်ဆို ရင် သူ့ တစ်ထည်ဆို ညည်း 2ထည်ပြန်ချုပ်လို့ရတယ်
ကျုပ်သား ဘွဲရ အလုပ်ရပြီးချိန်အထိ
သား နဲ့ ပျော်ပါရစေဦးဗျာ ၊
( ကုသိုလ်ကံ မကောင်းတဲ့ နှလုံးသားဟောင်းကြီးကိုတော့ သားကို အမွေမပေးလို )
အသက်ရှည်ရှည် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေနိုင်ပါစေဗျာ..
ဆုတောင်းလေ. .. ဆုတောင်း …
မနက် ၅နာရီကျော်နေပြီ..။ သတင်းစာလုပ်လို့မပြီးသေးလို့.. အဲဒါ…
သဘောင်္သားတွေကတော့ သေတမ်းစာသဘောမျိုးထားရတယ်။ Next of kim ဆိုတာပေါ့။ ကိုယ့်လစာ ဘယ်သူ့ကိုပေးချင်လဲ သေရင်လျော်ကြေးဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲဆိုတာ ဖြည့်ရတယ်။ မြန်မာဥပဒေအရ တော့ အမွေဥပဒေကရှိပြီးသား မို့ သေတမ်းစာရေးဖို့ခက်မယ် ထင်တယ်
next of kin က အနည်းဆုံး ရုံးမှာကို ဖြည့်ရသေးးးတယ်။
ကိုယ်များ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ အချက်အလက်တွေ..
အန်တီလည်း အဲဒီ will ကို ရေးချင်နေတာ ဖုတ်ဝင်တဲ့ကိစ္စ္စစကတည်းက။
(သူတို့ဆီမှာတော့ အကယ်၍များ ငါBrain death ရတာ ၁၅ရက်ကျော်ရင် ငါ့ကို စက်တပ်မထားပါနဲ့၊ ပိုက်တွေမထည့်ပါနဲ့ ။Heart arrest ရရင် Resusitate မလုပ်ပါနဲ့ ။….) စတာတွေ ရေးထားလို့ရတယ်တဲ့။
အန်တီလည်း အဲဒါမျိုး ရေးထားချင်နေတာ။
သေပြီးနောက် ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ဆွေမျိုးတွေ လုပ်ချင်တာ လုပ်၊ကိုယ်လည်း မသိနိုင်ဘူးလေ။
ကိုယ်အသက်မထွက်ခင် နာနေတဲ့အချိန် တာရှည်လာရင် သူများကို ဒုက္ခမပေးချင်ဘူး။အသိမရှိပဲ စက်တွေနဲ့ အသက်ရှင်နေရတာလည်း မဖြစ်ချင်ဘူး။
ဒါကြောင့် အန်တီရဲ့ သေတမ်းစာလည်း ပြင်ဆင်နေတယ်။
သေပြီးရင် မျက်ကြည်လွှာလှူဖို့၊ (ခန္ဓာကိုယ်လှူတာတော့ အခု လက်ခံတဲ့နေရာတွေ အဆင်မပြေဘူးလို့ ကြားနေရတယ်။ဂူမသွင်းဖို့ ။………………)
နာရေးကြော်ငြာလည်း ကြိုရေးထားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်။
ကျနော်ဖြင့် အဲလိုတွေအသေးစိတ်တောင် မတွေးရသေးပါဘူး အာတီဒုံ။
သေတမ်းစာ မဟုတ် ပေ မယ့် အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေက တော့
သူ့ရဲ့ပင်စင်လစာငွေတွေ ခံစားခွင့် တွေကို ဘယ်သူကိုပေးတယ်ဆိုတာ
ဒါပေမယ့်ဒါ က နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပေးတာ နဲ့ ပိုင်ဆိုင်တယ်။
အပြင်မှာ ပိုင်ဆိုင်တာတွေ မပါ ဘူးနော်။
ဇီဇီ လုပ်မှပဲ ကိုယ်ဟာကိုဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်သွားတယ်
ဘုကိုမှ မပြောပဲ မလွဲပဲထားတာတဲ့ ပါစင်နယ် ဘဏ်အကောင့်တွေက ကိုယ်မရှိရင် ဘယ်သူ၇သွားမှာလဲ
ဒီက ဥပမေဒမှာလည်း သေတမ်းစာရေးလို့ ရရင် ကောင်းမယ်
မိသားစုထဲ မှာ အမွေမှုပွေတဲ့ ကိစ္စ လတ်တလောကို ရှိနေလို့
ဘေးက ထိုင်ကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲတယ်
အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်း လူဝမ်းတွေ အကုန်ကွဲပြီး ရပ်တော့တယ်။
အဲဒါ.. မိဘသေတော့..မြေရောင်း.. အိမ်ရောင်းအမွေခွဲကြတာမှာ.. အဲဒီမြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်..အမွေခွဲနည်းနဲ့.. ကျန်ရစ်သူတွေ.. ဆော်ထည့်လိုက်ကြပြီးသကာလ..
ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာ.. အဲလိုလုယူမှ.. ကိုယ်နဲ့… ထိုက်ပြီး.. ရသွားတာဆိုတာပဲ..။
အဲ့ဒီသူကြီးကို အရမ်းမုန်းတာပဲ မေမေ
. သေတမ်းစာ ရေးပြီးသား။
. ကိုယ့် organs တွေ သေချိန် ယူဖို့ လှူပြီးသား။
. ခန္တာကြီး ကိုတောင် စားမဲ့ အကောင်တွေ ရှိရင် ကျွေးပေးစေချင်တာ။
. မေးကြည့် ဦးမယ်။
. သေရင် တော့ မကြော်ငြာ ချင်ဖူး။
. ကိုယ့် အသက် လူသိ မစိုးလို့။
ကျွန်မလဲ အဲဒီ ကဗျာလေး ကို အတော်ကြိုက်ပါတယ်။
သရဏဂုံ တင်ဖို့ မလိုဘူး လို့ မှတ်ပြီး ကြိုးစားနေပါတယ်။
ကိုယ်မဟုတ်တာ လုပ်ခဲ့လို့ မကောင်းတဲ့ နေရာ ရောက်မယ် ဆိုရင်လဲ Fair enough ပါဘဲ။
မဟုတ်ဘဲ နဲ့ သာ Transfer မလုပ် နဲ့။
ကွန်ပလိန့် တက်ပလိုက်မှာ။ lol:-)
မိဘ အနားမှာ နေပြီး ပြုစု နေသူ အမွေ ပိုယူ ပေါ့။
အဝေးမှာနေပြီး အနီးကပ် မပြုစုနိုင်ဘဲ မိဘ အမွေ ကို မလိုချင်ပါ။
မိသားစု ထဲ တော့ အဲလို ပြောထားတယ်။
ပြီးတော့ မြန်မာ ဥပဒေမှာ တခြားနိုင်ငံသား အဖြစ် ခံယူလိုက်ရင် အမွေယူလို့ မရဘူးဆို။
ပြီး.. ရန်ကုန်ပြန်သေတာမျိုး..။ အဲလိုကျ.. ဘယ်နှယ်လုပ်မလည်း….။
တချို့မိဘတွေက..အမျှော်အမြင်တော်တော်ရှိတယ်…။ ငါသေရင်မင်းတို့ရမှာမဟုတ်ဖူးဆိုပြီး.. လက်ဝက်ရတနာတွေချွတ်ပေးသွားတာလည်း.. မြင်ဖူး..။
တချို့ကျတော့လည်း.. သူသေရင်ငါရမှာမဟုတ်ဖူးဆိုပြီး.. ယူအက်စ်က သိန်းချီဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပစ်ပြီးကို.. မြန်မာပြည်သွား.. အတင်းနေနေတာလည်း.. မြင်ဖူး..။
တချို့ကျတော့လည်း.. မသေခင်ကတည်းက.. အမွေခွဲပေးထားဖို့.. သွားလုပ်တာလည်း.. မြင်ဖူး..
တချို့ကျတော့လည်း.. သေပြီးမှ.. ဘာမှမရလိုက်လို့ဆိုပြီး. တရားသွားစွဲတာလည်း..ကြားဖူး..။
အမွေရမရဆိုတာ.. ဥပဒေကြောင်းအရမျှတမှုဖြစ်သင့်တာပေါ့…။ သဘာဝကပေးတဲ့အတိုင်း.. ကိုယ့်ခံစားခွင့်အကျိုး ကိုယ်ရတာပဲဟာ..။
ရပြီးမှ မလိုချင်ဘူးဆိုပြီး ပြန်ပေးပစ်တာက..တမျိုး..။
ဥပဒေကဥပဒေ.. လုပ်ထုံးကလုပ်ထုံးနဲ့.. လူမှုရေးကလူမှုရေး ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်သင့်..။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်ကမလိုချင်ပေမယ့်.. ကိုယ့်ပါတနာ။ ကိုယ့်သားသမီးအရေးတွေလည်း ထည့်တွက်သင့်တယ်… ထင်..။ သူတို့လည်း.. ချွေးမ၊ မြေး ၀ါအဆင့်တွေပဲမို့လား..။
အရီးလတ်ပါစင်နယ်ကို စွက်ဖက်ဆိုလိုတာမဟုတ်.. ဆွေးနွေးကြည့်တာ.. သက်သက်..။ စိတ်မခုစေလို..။
ဘွမှာ မိဘ အမွေကို မလိုချင်ဘူး ဆိုပြီး ကျန်တဲ့ မောင်နှမတွေ ကို ရက်ရက်ရောရော ပေးပစ်ပြီး စောင်လေး တစ်ထည်စီပိုက်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အမျိုးသား ၂ ယောက်ကို မြင်ဖူးးး
တစ်ယောက်က မွေးမေလေ့ အဖေ (အနော့ အဖိုး)
တစ်ယောက်က မွေးမေလေ့ ယောင်္ကျား (အနော့ အဖေ)
ခုကတည်းက ကျနော့ကို ဘာပေးမယ်… (ကျနော် စီဒီဇင်ရှစ် ပြောင်းခဲ့ရင်တောင် ရမဲ့ အမွေမျိုး)
ဇော်သန့်ကို ဘာပေးမယ် စီစဉ်နေ။
ဒီလူ ဒီလူ ချင်း စိတ်ခု စရာလား။
ကျွန်မ ကတော့ ကိုယ့်မှာ အားနည်းချက်ရှိလို့ ဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီး မြင့်အောင် တွေး ဖို့ ဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန် ထောက်ပြပေးရင် ကျေးဇူး တောင် တင်ပါတယ်။
အခု တော့ ဆွေးနွေး ရင်း ရန်ဖြစ်ရအောင်။
သူကြီး မင်း က မြန်မာ့ တစ်ခြား အယူ တစ်ချို့ ကိုတော့ တော်လှန်ရေး လုပ်နေပြီး
“မွေခံ ထိုက်စေ” ကို တော့ ယူသတဲ့ လား ရှင့်။
အတည် နောက်တာပါလေ။ အဟိ။ lol:-)
မြန်တျန့်ပြည်မှာ ရှိရှိ မရှိရှိ ၊ တရားဝင်ဝင် မဝင်ဝင် ကျောက်စ်ကတော့ ရေးမှာပဲ…
အလုပ်ထွက်ရင် အလုပ်ပြောင်းရင်တောင် နောက်လူအတွက် ဂျူတီထရန်စဖားရေးရသေးတာ…
လူ့လောက က ထွက်ရမယ်ဆို… ကျန်ရစ်သူတွေ အငြင်းမပွါးရစေဖို့ ရေးသင့်တာပေါ့…
ကိုယ်သေမှ ကိုယ့်ဆန္ဒကိုလွန်ဆန်ပြီးလုပ်ချင်လုပ် ၊ ကိုယ်တွေကတော့ ရေးပြီးရင် စိတ်ဖြောင့်မှာ…
ရေးမှာပဲ။ ဘူမှ မတားကြနဲ့။
နောက်တစ်ပတ် အတွက် သတင်းစာထဲကို ကျောက် ဟင်းစပ်ထဲကပဲ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ပေးလိုက်တယ်။
၂ ပတ် ဆက်တိုက် ကျောက် ခရက်ဒစ်နဲ့ ထမင်းဆိုင် ပေါ့။
တစ်လောက ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ယောက် သေတမ်းစာရေးဖို့ ကျွန်မကိုလာတိုင်ပင်ပါတယ်။ ကျွန်မမိတ်ဆွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးကလေး(၅)ယောက် အဖေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမွေးထားတဲ့ သား / သမီး (၅) ယောက်အနက် အကြီးဆုံး သား (၃) ယောက်မှာ မိဘများနှင့် ခွဲနေသော အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်ကြပြီး အငယ် (၂)ယောက်မှာအိမ်ထောင် မရှိသူ အရွယ်မရောက်သေးသောသမီး လေးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မမိတ်ဆွေဟာ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း ၎င်းရှာဖွေထားသောပစ္စည်းဥစ္စာများကို သားသမီး (၅) ယောက်လုံးကို မျှမျှတတ ခွဲပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒ ရှိတဲ့ အတွက် သေတမ်းစာရေးချင်ကြောင်း ကျွန်မကိုလာတိုင်ပင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသေတမ်းစာရေးသားတယ်ဆိုတဲ့ အလေ့အထမရှိကြောင်းနှင့် အစ္စလာမ် ၊ ခရစ်ယာန်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူများသာ သေတမ်းစာရေးသားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေဟာတစ်ခြားဘာသာ ၀င်များ ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ မိဘများသေဆုံးခဲ့ပါက ကျန်သားသမီးများက ကျန်ရစ်ခဲ့သော အမွေပစ္စည်းကိုညီတူညီမျှ ခွဲဝေယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပြီးအမွေပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမွေဆက်ခံခွင့် ကိုဥပဒေနှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသားကြီး သြရသ ဟာဖခင် သေဆုံးချိန်မှာ အရွယ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါက မိခင်ထံမှာအမွေကိုဦးစွာတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး၊ ထို့အတူသမီးကြီး သြရသမှာလည်း ဖခင်သေဆုံးချိန်၌ အရွယ်ရောက်သူဖြစ်ပါ က ဖခင်ထံမှ အမွေကိုဦးစွာတောင်းခံပိုင်ခွင့် ရရှိထားပါတယ်။ သြရသ သားသမီးများ………….
သတင်းအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===>
ဗဟုသုတ | 5930 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
Posted by ဇာနည်ကျော် (iMyanmarHouse.com) အနှစ်သက်ဆုံးစာရင်းသို့ထည့်ရန်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေဟာတစ်ခြားဘာသာ ၀င်များ ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ မိဘများသေဆုံးခဲ့ပါက ကျန်သားသမီးများက ကျန်ရစ်ခဲ့သော အမွေပစ္စည်းကိုညီတူညီမျှ ခွဲဝေယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပြီးအမွေပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမွေဆက်ခံခွင့် ကိုဥပဒေနှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသားကြီး သြရသ ဟာဖခင် သေဆုံးချိန်မှာ အရွယ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါက မိခင်ထံမှာအမွေကိုဦးစွာတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး၊ ထို့အတူသမီးကြီး သြရသမှာလည်း ဖခင်သေဆုံးချိန်၌ အရွယ်ရောက်သူဖြစ်ပါ က ဖခင်ထံမှ အမွေကိုဦးစွာတောင်းခံပိုင်ခွင့် ရရှိထားပါတယ်။ သြရသ သားသမီးများ ဟာမိခင်(သို့မဟုတ်) ဖခင် ဖြစ်သူသေဆုံးချိန်၌ အရွယ်မရောက်သေးပါက ထိုအခွင့်အရေးကို ရရှိမည် မဟုတ်ဘဲအခြားသားသမီးများကဲ့သို့ မိဘနှစ်ပါးလုံးသေဆုံးပြီးချိန်၌သာအမွေကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ မိတ်ဆွေခမျာ သူသေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းကျန်ရစ်ခဲ့မည့် အရွယ်မရောက်သေးသူ သမီးနှစ်ယောက် နှင့် အိမ်ထောင်သည် သား (၃) ယောက်တို့၏ အမွေပစ္စည်းခွဲယူမည့်အရေးကိုစိတ်မအေးနိုင် ဖြစ်နေရှာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မမှ မိတ်ဆွေကိုအကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သေတမ်းစာ ရေးသားခြင်း မပြုနိုင်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်မိသားစုတွင်းအမွေစီမံစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များအနေနှင့် သားသမီး (၁) ယောက်တည်းအားအမွေများစုပုံပေး၍ မရသောကြောင့် ယင်းအမွေစီမံမှုစာချုပ်တွင် ပစ္စည်းအားလုံးကို လက်ရှိအသက်ရှင်လျက်ရှိသောဖခင်အတွက် ဝေစု (၁) ပုံထားပြီး ကျန်သားသမီး(၅)ယောက် အတွက်(၅)ပုံ၊ စုစုပေါင်း (၆)ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲဝေရေးသားရပါမယ်။ ထိုအမွေပစ္စည်းများကို ဖခင်က သားသမီးများကိုလက်ရောက်ပေးအပ်နိုင်သကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားချင်သော ဆန္ဒရှိပါကလည်းထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ပါသေးတယ်။
ဖခင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်ခဲ့သောဖခင်၏ဝေစု (၁)ပုံကိုသားသမီးများကအညီအမျှ ခွဲဝေယူနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုအမွေစီမံမှုစာချုပ်ကိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၆၀၀ ကျပ် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအမွေစီမံမှုစာချုပ်ထဲ၌ ပါဝင်သူအားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်ပြီးသက်သေ (၂) ယောက် ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသားကြီး သြရသ ဟာဖခင် သေဆုံးချိန်မှာ အရွယ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါက မိခင်ထံမှာအမွေကိုဦးစွာတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး၊ ထို့အတူသမီးကြီး သြရသမှာလည်း ဖခင်သေဆုံးချိန်၌ အရွယ်ရောက်သူဖြစ်ပါ က ဖခင်ထံမှ အမွေကိုဦးစွာတောင်းခံပိုင်ခွင့် ရရှိထားပါတယ်။ သြရသ သားသမီးများ ဟာမိခင်(သို့မဟုတ်) ဖခင် ဖြစ်သူသေဆုံးချိန်၌ အရွယ်မရောက်သေးပါက ထိုအခွင့်အရေးကို ရရှိမည် မဟုတ်ဘဲအခြားသားသမီးများကဲ့သို့ မိဘနှစ်ပါးလုံးသေဆုံးပြီးချိန်၌သာအမွေကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့နေရာလေး မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ သိရင် ရှင်းပြပေးပါလားးး
ရုံးစား ဂတ်စား ရှေ့နေစား
ခုဟာက ဥပဒေက ပိုများရှုပ်လေသလားပဲ။
မိဘသေဆုံးချိန် သား/သမီး ကြီးက အမွေထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်နေရင် အရင် အမွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး
အရွယ်မရောက်သေးရင်တော့ ကျန်တဲ့ သားသမီးတွေ နဲ့ တန်းတူ အရွယ်ရောက်မှ ယူနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်ထင်ပါရဲ့။